MTUWebAdmin – Mandalay Technological University
မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်ဘွဲ့ကြို အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဗိသုကာ သင်တန်းများသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများအမည်စာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်များအတွက် ကျောင်းအပ်လက်ခံမည့် ကာလ (29.10.2019) မှ ( 20.11.2019) *** ဝင်ခွင့်အမှတ်စဉ်အား ၄ဘာသာပေါင်း ( English, Maths, Physics, Chemistry) ရမှတ် အများအနည်းအလိုက် စဉ်ထားပြီး ၄ သာသာပေါင်းအမှတ်တူပါက ၆ ဘာသာရမှတ်ပေါင်းဖြင့် စဉ်ထားပါသည်။
ပထမနှစ်ဘွဲ့ကြို ဇီဝနည်းပညာသင်တန်း ဝင်ခွင့်ရရှိသူစာရင်း
မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်ဘွဲ့ကြို ဇီဝနည်းပညာသင်တန်းသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများအမည်စာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်များအတွက် ကျောင်းအပ်လက်ခံမည့် ကာလ (29.10.2019) မှ ( 20.11.2019) *** ဝင်ခွင့်အမှတ်စဉ်အား ၄ဘာသာပေါင်း (Maths, Physics, Chemistry, Bio) ရမှတ် အများအနည်းအလိုက် စဉ်ထားပြီး ၄ သာသာပေါင်းအမှတ်တူပါက ၆ ဘာသာရမှတ်ပေါင်းဖြင့် စဉ်ထားပါသည်။
The 46th ship for Southeast Asian and Japanese Youth Programme-SSEAYP for National Leader
The 46th ship for Southeast Asian and Japanese Youth Programme-SSEAYP for National Leader ၂၀၁၉ ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့တွင်းအသက် (၃၁)နှစ်မှ (၄၉)နှစ်အတွင်း ရှိသည့် ဆရာ/ဆရာမများ လျှောက်ထားနိုင်သည်။ လုပ်သက် (၂) နှစ် ပြည့်ပြီးဖြစ်ရပါမည်။လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် HR office တွင် (25.6.2019) ရက်နေ့ နေ့လယ် (၁၂းဝ၀) နာရီ နောက်ဆုံးထား စာရင်းပေးသငွ်းရမည်ဖြစ်သည်။ အရည်အချင်းစစ်ဆေးရန်အတွက်….. လူတွေ့ စစ်ဆေးခြင်းကို (26.6.2019) ရက်နေ့ (10:00 AM) တွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
The 46th ship for Southeast Asian and Japanese Youth Programme-SSEAYP for Participating Youth
The 46th ship for Southeast Asian and Japanese Youth Programme-SSEAYP for Participating Youth ၂၀၁၉ ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့တွင် အသက် (၁၈)နှစ်မှ (၃၀)နှစ်အတွင်း ရှိသည့် ဆရာ/ဆရာမ၊ ဝန်ထမ်း နှင့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ လျှောက်ထားနိုင်သည်။လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် HR office တွင် (24.6.2019) ရက်နေ့ နေ့လယ် (၁၂းဝ၀) နာရီ နောက်ဆုံးထား စာရင်းပေးသငွ်းရမည်ဖြစ်သည်။ အရည်အချင်းစစ်ဆေးရန်အတွက်….. အင်္ဂလိပ်စာရေးဖြေစာမေးပွဲ>>> ( 25.6.2019) ရက်နေ့ (9:00 AM to 12:00 PM) ** Library တွင် SSEAYP မေးခွန်းဟောင်းအား လေ့လာနိုင်ပါသည်။ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်းအား (26.6.2019) ရက်နေ့ညနေပိုင်းတွင်...
The Twelfth National Conference on Science and Engineering, NCSE-2019
Opening Ceremony Time: 9:00 AM Date: 21-6-2019 Venue: Convocation Hall, MTU Registration စာတမ်းဖတ်ကြားမည့် စာတမ်းရှင်များအနေဖြင့် ….. ၂၀.၆.၂၀၁၉ ရက်နေ့ ညနေ (၂း၃၀ ) မှ (၄း၃၀) အချိန်အတွင်း Human Resource Office ရုံးခန်းတွင် Registration ပြုလုပ်ပေးကြပါရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။ စားဖတ်ပွဲတက်ရောက်မည့် ဧည့်သည်တော်များ၊ Chair ၊ Moderator နှင့် Observer ဆရာ ဆရာမများအနေဖြင့် ….. (၂၁.၆.၁၀၉) ရက်နေ့နံနက် (၈းဝ၀) နာရီ တွင် Registration ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ Conference Programme Conference Programme ကို အောက်ပါ Link တွင်...
Call For Paper: The Twelfth National Conference on Science and Engineering, NCSE-2019
မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် (၁၂)ကြိမ်မြောက် အမျိုးသားအဆင့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်ပွဲအခမ်းအနားကို (၂၁.၆.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ကြားနေသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဆရာ ဆရာမများအနေ ဖြင့် စာတမ်းတင်သွင်းရမည့် ပုံစံကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများတွင် အြကောင်းကြားစာအား ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြင်ပမှ စာတမ်းတင်သွင်းဖတ်ကြားမည့် စာတမ်းရှင်များအနေဖြင့် မိမိတို့ဖတ်ကြားမည့် စာတမ်းများ၏ Full Paper (.doc / .pdf) နှင့် Agreement Form များကို ncse.mtu.mdy@gmail.com သို့ ၂၅.၅.၂၀၁၉ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Paper Format ကို >> Paper Format Download here Agreement Form ကို >> Agreement Form...